Maareeyaha Macaamiisha ee Baxsan: Barnaamijka Maareeyaha Xiriirka Bilaashka ah ee Xafiiska 365 Ganacsi Lacageed | Martech Zone
Maareeyaha Macaamiisha ee Tooska ah: Maareeyaha Xiriirka Bilaashka ah ee Xafiiska 365 Ganacsi Lacageed
Isniin, Janaayo 8, 2018 Douglas Karr
Saaxiibkey ayaa i weydiinayey waxa qaali ah maareeyaha xiriirka macaamiisha ma u adeegsan kartaa meheraddeeda yar. Su'aashaydii iigu horaysay waxay ahayd xafiiska iyo e-maylka ay adeegsanaysay si ay ula xidhiidho rajada iyo macaamiisheeda jawaabtuna waxay ahayd Office 365 iyo Outlook. Is-dhexgalka emaylku wuxuu fure u yahay hirgelinta CRM kasta (mid ka mid ah arrimo dhowr ah), sidaa darteed fahamka waxa aaladaha horayba looga adeegsaday shirkad ayaa lagama maarmaan u ah yareynta baaxadda alaabooyinka aad tijaabiso iyo / ama aad iibsato.
Dad badan ma ogaanin, laakiin Office 365 Business Premium Subscription wuxuu leeyahay kudar bilaash ah Muuqaalka, loo yaqaan Muuqaalka Macaamiisha. Waa kuwan muuqaalka guud ee barxadda:
Maareeyaha Macaamiisha Outlook wuxuu si otomaatig ah u abaabulaa macluumaadka, oo ay ku jiraan emayllada, shirarka, wicitaanada, qoraalada, shaqooyinka, heshiisyada, iyo waqtiyada kama dambaysta ah ee hal meel ah Xusuusin waqtiyeysan iyo liistada mideysan ee xiriiradaada iyo heshiisyada ugu muhiimsan ayaa gacan ka geysanaya hubinta in waxa muhiimka ah ay maskaxda ugu sarreeyaan. Waadna la wadaagi kartaa macluumaadka macaamiisha kooxdaada oo dhan si macaamiisha ay u helaan waayo-aragnimo isdaba-joog ah iyadoon loo eegin cidda ay la hadlayaan.
Maareeyaha Macaamiisha ee Muuqaalka, uma baahnid inaad rakibto softiweer cusub ama aad maalmo tababar ku qaadatid kooxdaada. Iyo sababta oo ah xogtaadu waxay kusugan tahay Office 365, lumin maysid waqti qiimo leh sameynta xiriiriyeyaasha softiweerka ama adeegyada kale ama maamulida alaabooyin gaar ah.
Barnaamijka Mobiilka Maareeyaha Macaamiisha ee macruufka wuxuu ku siinayaa inaad si dhakhso leh ugu hesho macluumaadka macaamiisha markaad socoto ama aad rabto inaad si dhakhso leh u soo qabato macluumaad cusub
Shirkaduhu way ka faa'iideysan karaan Microsoft Flow si aad ugu waddo hogaaminta barnaamijyada iyo boggaga Maamulaha Xiriirka Muuqaalka.
Soo Degso Maareeyaha Xiriirka Muuqaalka ee iOS
Tags: la xiriir maamulahaCRMmaareeyaha macaamiishaMicrosoftmicrosoft crmxafiiska 365aragti crmaragtida maareeyaha macaamiishaganacsiga yar yar
Waa maxay Server Server? Sidee ayuu Adeeggu Xayeysiintu u shaqeeyaa?